ग्यास्ट्रिकको समस्या छ भने झुक्किएर पनि नखानुस् यी ७ खानेकुरा नत्र ज्या`नै जान सक्छ (भिडियो हेर्नुस्) - Info Nepal
INFONPLस्वास्थग्यास्ट्रिकको समस्या छ भने झुक्किएर पनि नखानुस् यी ७ खानेकुरा नत्र ज्या`नै जान सक्छ (भिडियो हेर्नुस्)
ग्यास्ट्रिकको समस्या छ भने झुक्किएर पनि नखानुस् यी ७ खानेकुरा नत्र ज्या`नै जान सक्छ (भिडियो हेर्नुस्) । ग्यास्ट्रिक भनेको एस्तो चिज हो जुन कसै लाई छाड्दैन भनिन्छ ७५% नेपालीलाई ग्यास्ट्रिक छ । खानपान गर्ने तरिका नमिल्दा ग्यास्ट्रिकको समस्याले सताउने गर्छ ।
ग्यास्ट्रिक भनेको पेटको भित्री भाग सु-न्निनु, ग्यास बढ्नु भन्ने हुन्छ । यस्तो समस्या भएमा पेट फुल्ने, हावा भरिएको अनुभूति हुने, खानेकुरा राम्ररी नपच्ने, लामो समय नखाँदा पेट पो-ल्ने, खान मन नलाग्ने, ढ्याउ आइरहनेलगायत समस्या हुन्छन् । यसले पाचन प्रणालीमा पनि बाधा उत्पन्न गराउँछ ।
जसले गर्दा शरीरमा रगत, क्याल्सियमलगायत कमी हुन जान्छ । यसको समयमै उपचार नगरेमा पेटको अल्सर र क्यान्सर नै हुन सक्छ । त्यसैले ग्यास्ट्रिक भएका व्यक्तिले खानपानमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ ।यदि तपाइलाई पनि ग्यास्ट्रिकको समस्या छ । भने भुलेर पनि यी खानेकुरा नखानुहोला ग्यास्ट्राइटिस भएकाले ए-सि-डिक खानेकुराको प्रयोग गर्नुहुँदैन ।
जसमा कागती, सुन्तला, निबुवा, भोगटे आदि फल पर्छन् । यस्तो समस्या भएकालाई टमाटरले पनि धेरै असर पु-याउँछ । खान पिन मा कन्टोल गरियन भने यो रोग ले कसैलाई रकहिले छड्दैन खानपिन लाई आफुले कन्टोल गर्नुहोस् आफै बिस्तारै निको हुदै जान्छ ।
हेर्नुस् भिडियो सहित
नेपालमा आज पनि ठुलो संख्यामा थपिए नयाँ को-रोना संक्रमित, यती धेरैको मृ-त्यु ! कुन जिल्लामा कति संक्रमित थपिए ?
नेपालमा यसरि घट्दैछ नयाँ को-रोना संक्रमितको संख्या, कुन जिल्लामा कति संक्रमित थपिए ?
अबस्य जान्नुहोस यस्ताे आलु खाँदा हुनेछ विष खाए बराबर! सेयर गरेर जानकारी दिनुहोला
गर्मीमा प्याज यी बहुउपयोगी फाइदा जान्नु भयाे भने, आजैबाट खान थाल्नुहुनेछ